फ्रिजमा के राख्‍न हुने, के नहुने ? - GalaxyPati
फ्रिजमा के राख्‍न हुने, के नहुने ?
२०७८ आश्विन २१, बिहीबार १६:०३
जबसम्म हामीले फ्रिजमा राखेका सामान बिग्रँदैन वा त्यसको स्वाद अप्रत्याशित रुपमा खराब भएर जाँदैन हामीले फ्रिजमा सामानको भण्डारणको महत्वबारे बुझ्दैनौं। यसरी नासिएर जाने चीजहरुमा बढि तरकारी र फलफूल पर्छन्। यस्ता चीज खराब हुँदा केवल पैसा मात्र खेर जाँदैन त्यो सँगै यसले वातावरणमा पनि असर पार्छ । सामानको कम खरिद र घरमा भएका उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुबाहेक खानेकुराको नोक्सानी हुन नदिनको लागि कसरी सही तरिकाले यसको भण्डारण गर्ने भन्‍ने कुराको ज्ञान हुनु पनि जरुरी छ । तपाईं को सहजताको लागि हामी सामान्य खाने कुराहरु कसरी गलत तरिकाले राख्‍ने गर्छौं र कसरी राख्‍नुपर्छ भन्‍ने कुरा बताउन गइरहेका छौ ।
टमाटार/गोलभेडालाई फ्रिजमा नराख्‍नुहोस्
टमाटरलाई फ्रिजमा राख्नु राम्रो होइन । जबसम्म टमाटर काटिएको वा धेरै पाकेको हुँदैन, तबसम्म त्यसलाई कोठाको सामान्य तापक्रममा राखिनुपर्छ । यसरी टमाटर राम्रोसँग पाक्न पाउँछ र स्वादको गुण बढ्ने गर्छ । टमाटरलाई फ्रिजमा राखियो भने त्यो पुरा पाक्न र रातो हुन पाउँदैन र पाकेको टमाटरको पनि स्वाद हराउँदै जान्छ । टमाटरलाई भान्सामा कुनै भाडामा राखि किराबाट जोगाउनको लागि पातलो कपडाले ढाकेर राख्‍नुपर्छ ।
जरा भएका तरकारीलाई झोलाबिना फ्रिजमा नराख्‍नुहोस्
जरा भएका फलफूल वा तरकारीहरुलाई झोलामा हालेर फ्रिजमा राख्‍नाले लामो समयसम्म ताजा रहने गर्छन्। यस्तै जरा भएकाअन्य खानेकुराहरु जस्तो कि सखरखण्ड, अदुवा, गान्टेमुला, हरियो लसुन, हरियो प्याज, साग आदि राख्दा झोलामा राखेर बल्ल फ्रिजमा राख्‍नुपर्छ । झोलामा राख्‍नाले यो लामो समयसम्म ताजा हुनुको साथै अलगै रहेर व्यवस्थित पनि हुने गर्छ । तर झोला प्लास्टिकको नभई पुनःप्रयोग गर्न सकिने कागजको वा कपडाको हुन जरुरी छ ।
सुपरमार्केटमा राखिए जसरी घरमा खानेकुरा भण्डारण नगर्नुहोस
सुपरमार्केटमा त्यहाँभित्रको तापक्रमअनुसार खानेकुराहरू बिक्रीको लागि प्रदर्शनमा राखिएका हुन्छन्। हामीले किनमेल गरेर घर फर्केपछि त्यहाँको जसरी नै सजाएर टपमा राख्‍नु हुदैन । त्यहाको तापक्रम र हाम्रो घरको कोठाको तापक्रम बिल्कुलै फरक हुन्छ र यसको सन्तुलन नमिलेर खानेकुरा बिग्रने गर्छ ।
सुपरमार्केटमा तरकारी फलफुलहरु बाहिर देखिने गरि फर्काएर राखिएको हुन्छ । घरमा पनि यसो गर्नु उचित हुँदैन । हरिया पात भएका तरकारीहरु र सागहरुलाई ओइलाउन नदिनकालागि जहिले पनि झोलामा राखेर फ्रिजमा राख्‍नुपर्छ । फलफुल र तरकारीका प्रकृति हेरेर त्यसलाई कहाँ कसरी भण्डारण गर्ने भनेर जान्‍नुपर्छ ।
खर्बुजालाई फ्रिजमा नराख्‍नुहोस्
गर्मी महिनामा तपाईंलाई स्वाभाविकरुपमै लाग्‍न सक्छ कि खर्बुजालाई फ्रिजमा राखेर चिसो बनाएर बल्ल खानुपर्छ । तर सत्य कुरा के हो भने फ्रिजमा तीनदिनभन्दा बढि राखिसकेपछि यसले आफ्नो स्वाद र रंग गुमाउदै जान्छ । त्यसैले सबैभन्दा उत्तम त खर्बुजालाई कोठाको तापक्रममा बाहिरी घामको किरण प्रत्यक्षरुपमा पर्न नदिइकन राख्‍नुपर्छ । धेरै दिनको लागि संचित नगरिकन समयमै खानु बेश हुन्छ । तर काटिएको खर्बुजा छ भने चाहि खानेकुराको सुरक्षाको कारणले पनि फ्रिजमा राख्‍नैपर्ने हुन्छ ।
हरियो फर्सीलाई फ्रिजको अधिक चिसो भागमा नराख्‍नुहोस्
हरियो फर्सीलाई फ्रिजमा राख्‍नु राम्रो कुरा हो तर अत्यधिक चिसोमा राख्नु पनि ठिक होइन । फ्रिजको अधिकचिसोबाट जोगाउनका लागि पेपर टावलमा बेरेर राख्‍न सकिन्छ । हरियो फर्सीलाई फ्रिजमा राखिएको पाँच दिन भित्र खानु उचित हुन्छ ।
भण्टा र काक्रोलाई फ्रिजमा नराख्‍नुहोस्
शायदतपाई भण्टा र काक्रा जस्ता खानेकुरा किनेर घरमा ल्याएपछि सोझै फ्रिजमा राख्‍न अभ्यस्त हुनुहुन्छ होला । तर सबैभन्दा राम्रो स्वादको लागि यी दुबै खानेकुरालाई कोठाको सामान्य तापक्रमको वातावरण उपयुक्त हुन्छ । भण्टाहरु सामान्यतया ५० डिग्री फरेनहाइटभन्दा न्यून तापक्रममा रहदा बढि संवेदनशील हुन्छन । अधिकचिसोमा छ देखि आठ दिनसम्म राख्‍नाले यसको रंग उड्ने र खराबभएर जाने गर्छ । यस्तै काक्रोको सन्दर्भमा पनि यहि कुरा लागू हुन्छ । अझ काक्रो त फ्रिजमा राखेको दुई वातीनदिन पछि नै बिग्रदै जान थाल्छ । यसैले यी चीजलाई बढिमा तीन दिनसम्म मात्र फ्रिजमा राख्नु ठिक हुन्छ र फ्रिज बाट झिकेपछि त्यसको उपभोग गरिहाल्नु पर्छ ।
पुरानो हरियो प्याजलाई सकभर नफाल्नुहोस
फ्रिजको चिसोमा रहँदा हरियो प्याजको आयु सात देखि दशदिनसम्मको हुन्छ । तर त्यसको जरा यथावत छ भने तपाईले त्यसलाई पुनःउमार्न सक्नुहुन्छ । प्याजको तल्लो भाग एक इन्चजति काटेर कुनै कपमा पानीमा डुबाएर राख्‍नुहोस् । त्यसपछि थाहा पाउनुहुन्छ प्याज फेरी कसरी हुर्कन्छ र बढ्छ भनेर । यसो गर्न धेरै मेहेनत पनि लाग्दैन र तपाईको केहि रकम पनि बचत हुन सक्छ ।
किम्बु, ऐसेलु, स्ट्रबेरी आदि फललाई धेरै दिनसम्म फ्रिजमा नराख्‍नुहोस्
स्ट्रबेरी, किम्बु, एसेलु आदि फललाई तिनको सौन्दर्य र स्वादको कारण धेरैले मन पराउँछन्। तर यिनीहरु चाँडै बिग्रने गर्छन्। सामान्यतया यी फलहरु दुई देखि तीन दिनसम्म ताजा रहन्छन्। यदि यस्ता फलहरु धेरै पाकेका छन भने फ्रिजमा राख्‍नुपर्छ र आफ्नो अनुकुल समयमा खाने गर्नुपर्छ । यस्तै प्रक्रिया केरामा पनि लागू गर्न सकिन्छ । पाकेको केरालाई फ्रिजमा राख्दा त्यसको बोक्रा निकालेर राख्‍नुपर्छ ।
जडिबुटिजन्य वनस्पति पानी बिना नराख्‍नुहोस्
जडिबुटिजन्य हरिया वनस्पतिहरुलाई त्यसै फ्रिजमा राख्‍नु हुदैन । यस्ता वनस्पतीलाई फ्रिजमा वा बाहिर सामान्य तापक्रममा राख्‍न सकिन्छ तर कुनै भाडामा पानीमा डुबाएर राख्‍नुपर्छ । यिनीहरुलाई गिलास वा कपमा पानीमा डुबाएर राखेर त्यसको माथिबाट कागजवा कटनको झोलाले छोपेर राख्‍नुपर्छ । जस्तो कि धनियालाई फ्रिजमा त्यसै राख्‍नाले यो छिटै सड्ने र गल्ने गर्छ तर पानीमा डुबाएर राख्‍दा ताजा रहिरहन्छ र मिठो वासना आउछ । धेरै जसो जडिबुटिलाई फ्रिजको आवश्यकता पर्छ तर तुलसी चिसोमा धेरै संवेदनशील हुने भएकोले कोठाको तापक्रममा राख्‍नुपर्ने हुन्छ ।
फलफूल र तरकारीलाई सँगसँगै नराख्‍नुहोस्
फलफूल र तरकारीलाई एकआपसमा सँगै राख्‍नु वास्तवमा राम्रो होइन । धेरैजसो फलफूलले ‘इथिलिन’ नामक खानेकुरालाई छिट्टै पकाउने हर्मोन उत्पादन गर्छ । यसले गर्दा अन्य संवेदनशील फलफूल तथा तरकारीहरु ती फलफूलको सम्पर्कमा आउँदा छिट्टै धेरै पाकेर कुहिने सम्भावना रहन्छ । यस कारणले गर्दा इथिलिन उत्पादक फलफूलहरु जस्तो कि स्याउ, एभोकाडो, आरु आदिलाई इथिलिन संवेदनशील तरकारीहरु जस्तो कि भण्टा, काक्रो, साग आदि बाट अलग्गै राख्नुपर्छ । यसै गरि यस्ता इथिलिन उत्पादक खानेकुरालाई हावा नपस्‍ने भाडामा बन्द गरेर राख्‍नु पनि हुँदैन । यसो गरेमा धेरै छिटो पाकेर सड्ने वा गल्ने सम्भावना रहन्छ । साभार नेपाल होम